Instagram ပုံပြင်တွင်မေးခွန်းများမေးနည်း။ Instagram တွင်ဘာအသစ်လဲ။ | Androidsis
စတစ်ကာများမိတ်ဆက်စဉ် Instagram ၏အရေးကြီးသောအခြားသတင်းများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်နေရသည် Instagram Stories တွင်မေးခွန်းများမေးရန်။ သန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းသည်သန့်ရှင်းသော interface ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အလွန်ဝေးကွာသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်သည်။
ဤအချိန်သည်အခြားအချိန်အခါများ၌ကဲ့သို့ Instagram ကိုတရားဝင်ပြုလုပ် ပုံပြင်များကိုမေးခွန်းစတစ်ကာများရောက်ရှိခြင်း။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်နောက်လိုက်များအားတုံ့ပြန်ချက်များရရန်သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုသိရန်မေးခွန်းများမေးနိုင်သည်။
1 Instagram သည်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစတစ်ကာများထပ်မံဖြည့်စွက်သည်
2 Instagram Stories ကိုဘယ်လိုမေးရမလဲ
Instagram စတစ်ကာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်မှုအသစ်များအားဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပြီး၎င်းတို့နောက်လိုက်များနောက်လိုက်များကိုနောက်ထပ်အတွေ့အကြုံပေးရန် Instagram ပုံပြင်များ သူတို့တစ်တွေပြီးပြည့်စုံတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်လာတယ် ပြီးတော့လူမှုကွန်ယက်ကအဲဒါကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်၊
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Instagram Stories မှာမေးခွန်းတွေပေါ်လာတယ် ကွန်ယက်တစ်ခုလုံးအတွက် ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္takeကိုယူသူ ဤအပျော့အပူချိန်နှင့်အတူအားလုံး ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ takes ကြာပါသည်။ ရုံမကြာမီအစည်းအဝေးပြီးနောက် IGTV ဟုခေါ်သည့် Instagram အက်ပလီကေးရှင်းသစ် ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုရေရှည်ဗွီဒီယိုတွေကိုလူမှုကွန်ယက်ကိုတင်ခွင့်ပေးတယ်။
ပြီးတော့မ သူတို့ကစစ်တမ်းစတစ်ကာများသို့မဟုတ် emojis စတစ်ကာများမဟုတ်ပါ, ကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းများကိုမေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤတွင်မေးခွန်းများသည်ပွင့်လင်းသောမေးခွန်းများဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုအသစ်ကိုအခြားလမ်းကြောင်းများသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ငါဆိုလိုတာက ကျနော်တို့ပွင့်လင်းမေးခွန်းများကိုအကြောင်းပြောဆို ကျွန်ုပ်တို့ရှိနောက်လိုက်များသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်များကအလွန်ရှည်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောစတစ်ကာနှစ်ခုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပြီး Instagram လူမှုကွန်ယက်မှဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပေးသည်။
Instagram Stories ကိုဘယ်လိုမေးရမလဲ
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့စတစ်ကာရဲ့ကောင်းကျိုးများကတော့ငါတို့မှာရှိလိမ့်မယ် မေးခွန်းဝေမျှနိုင်စွမ်းအပြင်အဖြေလည်းပါနိုင်သည် အသစ်တစ်ခုကို Instagram ကိုပုံပြင်၌တည်၏။ ဒါကြောင့်ငါတို့မေးခွန်းထုတ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာသည်အခြား Instagram Story နှင့် ad infinitum ကဲ့သို့ဖြစ်လာနိုင်သည်။ လူမှုကွန်ယက်တွင်သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့နောက်လိုက်များကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်၌ရှိသောအရာအားလုံးကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိကြသည်။ ယခုအခါ၎င်းတို့ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသူသန်း ၄၀၀ ကျော်ရှိသည်.
ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် သူတို့အား Instagram ကိုပုံပြင်များထဲကတစ်ခုဖန်တီးပါ.
ငါတို့နှိပ်ပါ စတစ်ကာအကြောင်းကို မေးခွန်းများ၏။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ Instagram ပုံပြင်တွင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသာမေးပြီးနေရာချရမည်။
သင်၏ Instagram Stories ၏နောက်လိုက်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သောအချိန်တွင်၎င်းသည်ဖွင့်နိုင်သည်တုံ့ပြန်ရန်တုန့်ပြန်ရန်ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ အဖြေကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူများသည်ပြproblemနာမရှိဘဲတစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်ဖြေဆိုနိုင်လိမ့်မည်။
ပြီးတော့ Instagram Stories မှာမေးခွန်းစတင်ခဲ့သူတွေအတွက်အဖြေတွေကိုကြည့်ရှုသူစာရင်းထဲမှာကြည့်ပါ။ သင်ဆန္ဒရှိပါက Instagram ပုံပြင်အသစ်ကိုဖန်တီးနိုင်မည့်အဖြေများကိုနှိပ်ပါ သင်ဖြေဆိုနေသည့်မေးခွန်းနှင့်အတူပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြုလုပ်နေခြင်းကိုရပ်တန့်သည်အထိအကြောင်းအရာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
Instagram Stories တွင်မေးခွန်းများမေးခြင်း၏ဤအင်္ဂါရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအနက်တစ်ခုမှာ၊ သငျသညျအသီးအသီးအဖြေကိုလုပ်သောအသုံးပြုသူကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည် သင်၏ကြည့်ရှုသူစာရင်းတွင်သင်၏အဖြေကိုသင်၏အဖြစ်အပျက်၌မျှဝေသောအခါသင်၏အဆက်အသွယ်၏ဓာတ်ပုံနှင့်အသုံးပြုသူအမည်ကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်သင်ပြီးသားကိုငါသိ၏ Instagram Stories တွင်မေးခွန်းများမေးရန် မကြာသေးမီလများအတွင်းကလူမှုကွန်ယက်၏အရေးကြီးဆုံးသတင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စကားမစပ်, သင် Android ကိုဗားရှင်း ၅၂ မှရနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် Google Play စတိုးကိုကြည့်ရှုပါသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော APK ဒေါင်းလုပ်ကိုကြည့်ပါ။
Instagram APK ကို Download လုပ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Instagram Stories တွင်မေးခွန်းများမေးခြင်း
နောက်ဆုံးထုတ် Netflix update ကအကြောင်းအရာတွေကိုအလိုအလျောက် download လုပ်ခွင့်ပေးတယ်